चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १० फागुन २०७५) | गृहपृष्ठ
Home लगानी कम्पनी विश्लेषण चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १० फागुन २०७५)
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (शुक्रवार, १० फागुन २०७५)
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनीको सहायक कम्पनी रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र मध्य भोटेकासी जलविद्युत कम्पनी रहेको छन् । रसुवागढी, सान्जेन र भाटेकोशी जलविद्युत कम्पनीले कर्मचारी सञ्चयकोषका सञ्चयकर्ता, कार्यरत कर्मचारी र संस्थापक संस्थागठित संस्थाका कर्मचारीहरुलाई शेयर जारी गरिसकेका छन् ।
रसुवागढी हाइड्रोपावर र सान्जेन जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण को लागि आईपीओ जारी गर्न सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले १ करोड २ लाख ६३ हजार १ सय ५० कित्ता आईपीओ जारी गर्न मङ्सिर २७ गते सेबोनमा निवेदन दिएको हो । विक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । साञ्जेन जलविद्युत कम्पनीले ५४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न पुस ४ गते निवेदन दिएको हो । यस कम्पनीको विक्री प्रबन्धक सिटीजन्स इन्भेष्टमेण्ट ट्रष्ट रहेको छ ।
कम्पनीले चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा रू. ४५ करोड ३१ लाख नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले कमी आएको हो । कम्पनीको विद्युत विक्रीमा कमी आएकाले नाफा घटेको हो । बिहीवार कम्पनीको ७९ लाख ३० हजार २ सय २६ दशमलव ३० कित्ता बोनस शेयर सूचिकृत भएको छ । २० प्रतिशत बोनस शेयर सूचिकृत भएको हो । अब यो शेयर लगानीकर्ताले खरीद विक्री गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीको आव २०७५/७६ र आव २०७४/७५ को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणबीच तुलना :
कम्पनीले पुस मसान्तसम्ममा विद्युत् विक्रीबाट रू. ६२ करोड ४२ लाख आम्दानी गरेको छ । यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव २५ प्रतिशत कम हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार मात्र अधिक विद्युत् ऊर्जा खरीद गर्ने र यस अवधिमा कम विद्युत् ऊर्जा खरीद भएकाले विद्युत् विक्री घटेको कम्पनीले प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
कम्पनीले रिजर्भ कोषमा रू. ४ अर्ब ४२ करोड छुट्याएको छ । कम्पनीको कुल चालू सम्पत्ति रू. १ अर्ब ७९ करोड र कुल चालू दायित्व रू. ३० करोड छ । सञ्चालन नाफा ६ प्रतिशत घटेर रू. ४८ करोड ३० लाखमा सीमित भएको छ ।
कम्पनीको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार प्रतिशेयर आम्दानी रू. १९ दशमलव ०५, मूल्य आम्दानी अनुपात २८ दशमलव ६५६, तरलता अनुपात ५ दशमलव ९७ प्रतिशत र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १ सय ९२ दशमलव ९० छ । बिहीवारको शेयर रू. ५ सय ५ कायम भएको छ ।
अर्निङ पावर रेशियो : ०.०४ गुणा
अर्निङ यिल्ड रेशियो : ३.७७ प्रतिशत
खरीद चाप : कम्पनीको बिहीवार भएको शेयर कारोबारको अन्तिम समयसम्म विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । यस अवधिसम्म २ हजार ९ सय ९१ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग र १ हजार ९ सय ५ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो ।
कम्पनीको ६७ दिनको कारोबार अवधिको अन्तिम दिनमा ह्याम्मर आकृति भएको मैनबत्ती बनेको छ । यस्तो आकृतिले कम्पनीको शेयरमूल्य बुलिशमा रिभर्स हुने संकेत गर्छ । विश्वसनीयता भने सामान्य छ । ओभरसोल्ड जोन २९ दशमलव ३५ विन्दुमा छ । यसले शेयर विक्री चाप बढेको देखाउँछ । कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड डेभिएशन १ दशमलव ५४ विन्दुमा छ । उतारचढाव न्यून छ । यस्तो अवस्थामा कम जोखिम हुन्छ भने प्रतिफल पनि कम हुने गर्छ । त्यस्तै, कम्पनीको मुभिङ एभरेजमा २६ दिने औसत मूल्यरेखा र १४ दिने औसत मूल्यरेखा एकअर्कासँग टाढिएका छन् । हालको मूल्य यी दुई रेखाभन्दा तल छ । पछिल्लो शेयरमूल्य रू. ५ सय ५ देखि बजारको अवस्था परिवर्तन भई मूल्य महँगिएमा रू. ५ सय ३७ मा प्रतिरोध पाउने देखिन्छ ।
(फागुन १० गते प्रकाशित चिलिमे हाइड्रोपावरको कम्पनी विश्लेषणमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ ।)